Fanodinkodinam-bola tao amin’ny Jirama : Haverina hotsaraina Mamy Ravatomanga -
AccueilRaharaham-pirenenaFanodinkodinam-bola tao amin’ny Jirama : Haverina hotsaraina Mamy Ravatomanga
04/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vola mitentina 4 Miliara Ariary no maha voarohirohy an’i Mamy Ravatomanga amin’ity raharaha ity. Vola nolazainy fa hofana milina nampiasain’ny Jirama teo anelanelan’ny taona 2010 – 2011. Tompon’andraikitra ambony tao amin’ny Jirama ny tenany tamin’izany. Tamin’ny alalan’ny orinasa maorisianina “Madagascar Utilities” moa no nanaovany ny afera maloto, ka nanereny ny Jirama handoa io faktiora amina miliara io. Isan’ireo tsy refesi-mandidy tao anatin’ny fitondrana Tetezamita i Mamy Ravatomanga, ka mora taminy ny nanao ny fomba rehetra nahazoana an’io vola be io.
Ny Jirama anefa dia nametraka mazava fa tsy nanao sonia fifanarahana tamin’io orinasa vahiny noresahiny io.
Efa nandeha tamin’ny volana marsa 2017 ity raharaha ity, ka nahazo “non lieu” teo anivon’ny tribonaly ambaratonga voalohany i Mamy Ravatomanga. Araka ny notaterin’ny gazety frantsay « La Lettre de l’Océan Indien », laharana n°1475, nivoaka ny 01 jona 2018 teo anefa, dia haverina hotsaraina indray ity raharaha ity, satria tsapa ny fisian’ny tsy fahalavorariana tamin’ny didy nivoaka. Ka ho tombontsoa ambonin’ny lalàna, dia handeha indray ny fitsarana an-dRavatomanga. Efa nisy, hoy ity gazety frantsay ity, ny didy azon’ny Tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny Fitsarana tampony avy amin’ny minisitry ny Fitsarana hanao ny “ pourvoi dans l’intérêt de la loi”.
Ankoatra ity raharaham-pitsarana miandry an-dRavatomgana ity, dia mbola miandry azy koa ny raharaha fanangonan-karena tsy mazava ao Paris. Efa nanokafan’ny Fampanoavana Frantsay fanadihadiana ny momba ireo tranony ao Levallois- Perret ny tenany. Ny taona 2011 moa no nahazoany izany ( tao anatin’ny fotoanan’ny fitondrana Tetezamita 2009- 2013) trano goavana sy lafo vidy miisa 4 izay tombanana ho 4 tapitrisa Euros. Natsikafon’ny gazety Frantsay “La Lettre de l’Océan Indien” nivoaka ny zoma 01 jona 2018 avokoa izany. Nampatsiahivin’ity gazety frantsay ity fa i Mamy Ravatomanga no mpamatsy vola ny mpanohitra amin’izao fotoana, ary manao izay hianjeran’ny fitondrana lanim-bahoaka. Ny tiany hotenenina amin’izany dia hataon-dRavatomanga izay hampianjera ny fitondrana mitady ny marina momba ny fanodinkodinana ny volam-bahoaka 4 Miliara Ariary. Volam-bahoaka ny volan’ny orinasa Jirama.
Sady efa norobaina ny Jirama no mbola taominy hitokona etsy amin’ny 13 mey koa ny mpiasa ao aminy, amin’izay potika tanteraka ilay orinasam-panjakana. Rariny raha handeha hatramin’ny farany ity raharaha ity, satria dia isan’ny antony iray tsy maha tafarina ny Jirama io fanodinkodinam-bola maha voarohirohy an-dRavatomanga io.